A Ezigbo John Letter gaara Nice, Google! | Martech Zone
Izuụ a, nke anyị Nchịkọta ọrụ maka nchịkọta ' saịtị ahụ furu efu na Google.
Achọghị m ime ihe ọ bụla jọgburu onwe ya, ya mere echere m otu ụbọchị. Miri ume. N'agbanyeghị ihe ọ bụla.
Ọ bụ mgbe ahụ ka a rụtụrụ m aka n’otu isiokwu Google nwere ike na-eme ụfọdụ ule na mgbanwe algorithm nwere ike ịbụ n'akụkụ nkuku. Saịtị ụfọdụ ahụla ụfọdụ mgbanwe gbara ọkpụrụkpụ n'ọnọdụ ha.
Iji ike dị ukwuu abịa nnukwu ọrụ. Amaara m na ọ bụ naanị nkwuputa sitere na ihe nkiri, mana geez Google. Ọ dị njọ nke na m na-ele saịtị m ka ha na-ada ma na-ada, na-agbasi mbọ ike ịmata nsogbu, gbanwee mgbanwe, debe ha ka ha bụrụ ndị ama ama. Ebe ọ bụ na akwụkwọ m na - eme ka njikarịcha ihe nchọta, ọ bụ naanị ikwenye na saịtị m karịa ndị ọzọ. N'aka ozo, ihe ịga nke ọma m dabere na nkwụsi ike gị na ogo nke okporo ụzọ dị mkpa ị na-agagharị na ntụzi m.
Na nkenke, Google, anyị nọ na mmekọrịta siri ike ebe a. A chọrọ m gị. M na-eme ihe niile ị na-ajụ… na-ebuli saịtị m, debanye aha na Webmasters, jiri isiokwu dị irè. M na-eme ihe ọ bụla ma na-amasị gị kwa ụbọchị… na-enye ndị ọbịa gị ọtụtụ tọn na tọn ọdịnaya iji tụọ aka. Kedu ihe m ga-enweta na nloghachi?
Enweghị ọtụtụ dị ka ihe edeturu.
Ọ bụ ezie na enweghị m ọkwa ọ bụla na Webmasters, emere m ụfọdụ tweaking na saịtị ahụ ma rịọ maka arịrịọ nlọghachi. Naanị ihe m nwere ike ịchọta nke nwere ike iwebata m na nsogbu bụ isiokwu dị na isiokwu nke anaghị egosi (onyonyo dị n'ọnọdụ ya)… ya mere m wepụrụ ya. Echeghị m na nke ahụ ga-ezuru gị ịhapụ m, mana onye maara. You gaghị agwa m.
Taa, obi dị m ụtọ ịhụ na anyị abịala ọkwa. Eleezie, Adịghị m ogo maka iri na abuo ma ọ bụ otú ahụ Keywords m na-adịbu, ma m nọ n'ọkwá # 1 maka ịde blọgụ maka Dummies - n'ihu Amazon na Wiley. Echeghị m na nke ahụ ga-ekwe omume nyere ha ewu ewu na backlinks… mana hey. Aga m ewere ihe m nwere ike inweta.
Ka emechara, Adịghị m njikere imebi ma, Google. Daalụ maka nlekọta. Oge ọzọ hapụụrụ m ezigbo akwụkwọ ozi John, n'agbanyeghị. Ọ bụ ihe kacha nta ị nwere ike ime maka ihe niile m tinyere na mmekọrịta a.
Tags: de-depụtarandị webmasters googlegoogle +ahịa search engineA
Dee Ugbu a Indy
Ọkt 27, 2010 na 8:36 AM
Akwa post Doug. Ihe okike. N'eziokwu, edere m akwụkwọ ozi yiri nke ahụ na DirecTV ọnwa ole na ole gara aga, naanị m bụ onye mebiri mmekọrịta ahụ (enweghị m ike ịnweta akara ngosi satịlaịtị). http://writenowindy.blogspot.com/2010/08/i-want-you-back-too-directv-but-we-just.html
Ederede leta a bu ezigbo uzo iji gosiputa nmekorita nke ndi mmadu na ndi ahia ha.
Ọkt 27, 2010 na 9:14 AM
Echere m na ọ bụ ala injinị nyocha nke kọọrọ Google na ọ na-eme glitchity (enweghị ndị otu adịchaghị mkpa iji gụọ miri emi na blọgụ ha). Naanị ya mere ya nke abụọ gara aga.
Na oge ọzọ, gosi akwụkwọ dum otu serps ka obere nyocha m na-egosi 😛 JK.
Rịba ama onwe gị - bido na-ebido nyochaa nyocha m (n'ikpeazụ)
PS - nloghachi nke Google Dance?
Ọkt 27, 2010 na 12:47 PM
M gbakwunyere peeji ọhụrụ na saịtị m, enweghị mgbanwe ọ bụla na ọtụtụ iri na abuo ndị ọzọ, ha wepụrụ m ebe 3 maka ụbọchị ole na ole tupu m jiri nwayọọ nwayọọ na-atụgharị m azụ ebe m malitere. Enweghị ntụkwasị obi, methinks.
Ọkt 28, 2010 na 8:13 AM
Nke a na - egosipụta nsogbu na itinye akwa niile n'ime nkata SEO. Echetara m na mụ na mmadụ ibe m nwere mkparịta ụka afọ ole na ole gara aga bụ onye kwuru na m na-enye ndị mmadụ ndụmọdụ ọjọọ mgbe m gwara ha na ha kwesịrị ịzụta mgbasa ozi, njikọ ahịa, ma mee ihe ndị ọzọ niile anyị na-eme iji nweta ahịa na mgbakwunye na ịdabere na injin ọchụchọ mgbe ihe ha choro ime bu imuta SEO. O jiri onwe ya dị ka ihe atụ n'ihi na ọ lere onwe ya anya dị ka onye ọkachamara SEO wee mee narị narị ole na ole kwa afọ site na saịtị ecommerce na saịtị wee nweta okporo ụzọ ya niile site na injin ọchụchọ yana ọtụtụ ya na Google. Ọnwa ole na ole ka e mesịrị, Google na-agba egwu, ọkwa ya kwụsịrị na azụmahịa ya.
Biko mara na anaghị m etinye aka na ị dabere na SEO naanị, mana enwere ọtụtụ ndị na-eme.
Ọkt 28, 2010 na 8:35 AM
Na Ọkt 28, 2010 9:18 AM, "ikwughachi"
Ọkt 28, 2010 na 7:51 PM
Hugh, enweghị m ike ikwenye karịa. Enweghị azụmaahịa kwesịrị inwe otu ụzọ nnweta!
Ọkt 29, 2010 na 6:38 AM
Mgbe m chere n’afọ gara aga, Microsoft gbara akwụkwọ maka bundling Explorer na Windows. Ukwuu ike ha kwuru mgbe ahụ…
Oge dị iche iche, echiche dị iche iche m chere
Ọkt 29, 2010 na 7:37 AM
Jacques, ọmarịcha ịnụ olu gị, sir! Ee, ekwenyere m kpamkpam. Anyị nwere mgbanwe ugbu a na mba niile iji gbochie ụlọ akụ na ụlọ ọrụ kaadị kredit na-eli azụmahịa… mana anyị na-ekwe ka otu ihe dị ka Google na-eguzo na enweghị ụlọ ọrụ ọpụpụ na nsonaazụ ọchụchọ ha. Anyị na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ebe mgbanwe na algorithm nke Google nwere ike ịmegharị ego kwa ọnwa site na narị otu narị puku dollar. Achọghị m ịma ya mgbe ọ dị mkpa… mana ike ịhapụ mmadụ n'enweghị ihe kpatara ya nwere ike iwe ndị mmadụ n'ọrụ ma merụọ ụlọ ọrụ ahụ nke ukwuu!